Ukurisayikilisha - Ukuhlaziya okuluhlaza | Ukuhlaziywa okuGreen (iphepha 2)
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuphinda kusetyenziswe kwakhona, ziziphi izibonelelo zazo kwaye zeziphi iimpawu ezinazo.
Izimvo zokuhombisa iingqayi zeglasi
Apha sikuxelela ukuba zeziphi ezona zimvo zibalaseleyo zokuhombisa iingqayi zeglasi kwaye wenze ikhaya lakho libe yindawo entle ngakumbi.
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga neempawu kunye nokusetyenziswa kwe-thermoplastics. Funda ngakumbi ngayo apha.
Yintoni enokuyenza ngeencwadi ezindala
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyazi malunga nokwenza malunga neencwadi ezindala ongazisebenzisiyo. Funda ngakumbi malunga neengcebiso apha.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuba kutheni ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kubalulekile kunye nezizathu zako.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nenkunkuma eqhumayo kunye neempawu zayo. Funda ngakumbi ngayo apha.
Iindidi zezikhongozelo zenkunkuma
Yazi ngokunzulu ukuba zeziphi iintlobo ezahlukeneyo zezikhongozelo zenkunkuma ezikhoyo. Sifundisa konke malunga nalo apha.
Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga neeplastiki ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nezibonelelo zazo. Funda ngakumbi malunga nezi mveliso.
Apho kuphoswa iimaski
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyazi malunga nokuba iimaski ziphoswa phi kwaye ziyintoni na indawo yabo. Funda ngakumbi ngayo apha.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi ukuze uyenze eyakho imeko yomoya ekhaya inyathelo ngenyathelo.
Phinda uhlaziye iinkonkxa
Sikuxelela ukuba kubaluleke ngantoni ukuphinda usebenzise kwakhona iinkonkxa kunye nokuzifaka kwisitya esimthubi. Funda ngayo apha.
Sikuxelela yonke into oyifunayo malunga nezinto ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo. Funda ngakumbi malunga nenkqubo yabo apha.
Kwenziwa njani iphepha
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nendlela iphepha elenziwa ngayo kunye nezinto ezisetyenziswayo.
Sikuxelela ukubaluleka kwenqaku elicocekileyo kulawulo lwenkunkuma yasezidolophini. Funda ngakumbi ngayo apha.
Indlela yokusebenzisa ntsha ekhaya
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nendlela yokusebenzisa kwakhona ekhaya. Funda ngakumbi ngayo apha.
Sikubonisa ezona zimvo zibalaseleyo kunye neengcebiso kwizinto ezihlaziyiweyo zekrisimesi. Funda ukunika umbono wakho kunye nokurisayikilisha.
Umahluko phakathi kweglasi kunye nekristale
Sikuxelela konke umahluko phakathi kweglasi kunye nekristale, iimpawu zazo kunye nokusetyenziswa kwento nganye. Funda ngakumbi ngayo apha.
Uyenza njani isepha
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokwenza isepha yokwenza ekhaya ukuze uphinde usebenzise ioyile esele isetyenzisiwe. Funda ngakumbi ngayo apha.
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-ecopark kunye nezibonelelo zazo. Funda ngakumbi ngale modeli yolawulo lwenkunkuma.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga neeplastiki zePET kunye neempawu zazo. Funda ngakumbi ngayo apha.
Kule nqaku sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-vermiculture, iimpawu kunye nebhayoloji yeentshulube.
Kweli nqaku unokulufumana lonke udidi lweendidi zeeplastiki. Funda malunga noncedo kunye nokwakhiwa kwayo apha.
Kule nqaku sichaza ukuba yintoni iprojekthi yokuCoca uLwandlekazi ukucoca iiplastikhi eziselwandle. Funda ngakumbi ngayo apha.
Ukurisayikilishwa kweefowuni zeplastiki
Ukurisayikilisha iminqwazi yeplastiki yenye yezona zigqibo zibalaseleyo onokuzenza kokubambisana kunye nokusingqongileyo. Ngena apha kwaye ufumanise ukuba kutheni.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nomgquba womgquba
Kule nqaku sichaza yonke into oyifunayo malunga nomgqomo womgquba. Yazi onke amanqaku kunye nezinto eziluncedo ezinazo.
Kule nqaku sichaza ukuba yintoni inkunkuma eyi-zero, ijonge ukwenza ntoni nendlela yokuyenza. Ngena apha ukuze uyazi ngokunzulu.
Kule nqaku sikubonisa ukuba yintoni ukubuyiswa kwenkunkuma kunye nendlela eyenziwa ngayo. Funda ngolawulo lwenkunkuma apha.
Funda ukuyisebenzisa kwakhona ifanitshala
Kweli nqaku sikubonisa ezinye zeembono zasekuqaleni zokufunda ukuphinda usebenzise kwakhona ifanitshala endala ekhaya. Sukuphoswa yiyo!
Phinda usebenzise iphepha
Kule nqaku sikubonisa ingxaki yokusetyenziswa kwephepha kwihlabathi liphela kwaye sikufundisa inyathelo ngenyathelo ukuba uphinde ulisebenzise njani iphepha ekhaya.
Kule nqaku sikubonisa ukuba yintoni ifenitshala yekhadibhodi kunye neempawu zayo eziphambili. Unokufunda malunga nokuhonjiswa okuzinzileyo.
Funda yonke into oyifunayo malunga nokubaluleka kw ichaphaza eliluhlaza. Ngena apha ukuze ufunde okungakumbi malunga nophawu lokurisayikilisha.
Phinda uhlaziye iimpahla
Kweli nqaku sikufundisa ezona ndlela zingundoqo zokuphinda usebenzise iimpahla ekhaya kwaye uzinike usetyenziso olutsha. Sukuphoswa yiyo!
Inkunkuma eqinileyo zezo zenziwa mihla le kwihlabathi liphela. Kule posi sichaza ukuhlelwa kwabo kunye nendlela abalawulwa ngayo.
Phinda usebenzise iiplastiki
Kule nqaku sichaza ngokweenkcukacha indlela yokusebenzisa kwakhona iplastiki ngendlela echanekileyo. Ngena apha ukuphendula imibuzo yakho.
Andiqinisekanga ukuba yeyiphi inkunkuma efakwe kwisitya esingwevu? Kule nqaku siyakuchaza ngokweenkcukacha. Ngena uze ufunde ngayo.
I-Upcycling yindlela yokurisayikilisha apho sinika khona inkunkuma enkulu kunangaphambili. Apha sichaza yonke into ngokweenkcukacha
Isikhongozeli esimdaka ngebala
Kule nqaku uza kukwazi ukusombulula onke amathandabuzo malunga nekhonteyina emdaka. Uya kufunda ukuba kufuneka uyiphose kwaye yintoni esetyenziselwa yona.
Kule posi sikubonisa ngendlela eneenkcukacha ezona zinto ziphambili ze-3r. Ngale ndlela sichaza indlela yokunciphisa, yokusebenzisa kwakhona kunye nokurisayikilisha.
Sichaza iintlobo zenkunkuma zokufaka kwisitya esimthubi. Ngena ukuze wazi ezona mpazamo zixhaphakileyo kunye nezinto ezithile onomdla kuzo.
Sichaza ngokweenkcukacha ukuba zeziphi izinto ezinokuphinda zisetyenziswe kwakhona kwaye kubaluleke ngantoni ukuphinda zisetyenziswe. Ngena kwaye ufunde ngakumbi ngayo.
Ibhotile yeglasi yokurisayikilisha ngumyalelo wosuku. Kweli nqaku uza kuba nakho ukwazi ukuba yintoni inkqubo yokurisayikilisha kunye namathandabuzo avelayo.
Phinda usebenzise iibhotile zeplastiki
Kule posi ungafunda izimvo ezininzi malunga nokuphinda usebenzise iibhotile zeplastiki kwaye ubanike ithuba lesibini. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Yintoni imveliso enokuboliswa ziintsholongwane
Imveliso enokuboliswa ziintsholongwane yinto enokuthotywa iyodwa kwindalo. Funda apha yonke into oyifunayo malunga nayo.
Kule posi uya kuba nakho ukwazi zonke iintlobo zeempawu zokurisayikilisha ezikhoyo kunye nentsingiselo yazo nganye yazo. Ngaba uyafuna ukubazi?